Faraska Quarter: waa maxay, inta uu socdo iyo astaamaha | Fardaha Noti
Jenny monge | | Dhibaateynta iyo Tuuladeynta Magaalada, Fardaha fardaha
Faraska rubuc, ama faraska rubuc, waa a faras faras oo asal ahaan ka soo jeeda Mareykanka gaar ahaan ku habboon jinsiyadaha gaagaaban (400 mitir), dhammaan noocyada kala duwan ee tartamada iyo bandhigyada la xiriira rodeos iyo sida faraska lo’da. Waa nooca loo yaqaan 'equine' xayawaanka ugu diiwaan gashan adduunka, in ka badan 4 milyan, tani waxay ka dhigeysaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan.
Isaga waxaa laga sheegaa inuu isagu yahay faraska kuwa lo'da iyo beeraleyda ah ee ku nool kuna dhinta fardahooda. Miyaynu isaga ka sii aqoon yar nahay?
2 Heerarka Rubuca Meel marka loo eego isticmaalkooda
3 In yar oo idinka mid ah taariikh
Qalfoof adag, murqo xoog leh iyo dherer u dhexeeya 142 cm ilaa 163 cm, Faraska Quarter wuxuu leeyahay feeraha ballaadhan iyo barar wareegsan. Madaxiisa yar ee leh muuqaal toosan, wuxuu leeyahay dhago gaaban oo aad u dhaqdhaqaaq badan, iyo sidoo kale indho nool oo siiya muujinta caqliga. Wax aan ku sii nagaanayn oo keliya muuqaal ahaan, maadaama iyaga laga sheegayo inay qiyaas ahaan u malaynayaan ujeeddooyinka uu wadaha u leeyahay inuu dhaqdhaqaaqyo dhaqso leh ku sameeyo meel bannaan. Tani way ka dhigaysaa sinaanta ugu fiican ee lo'da, Ma aha oo kaliya awoodiisa wanaagsan ee fuulista, laakiin sababta oo ah marka lagu daro a orodyahan aad u fiican oo masaafo gaaban ahleeyihiin a iska caabin badan oo socodka dheer ah haddii loo baahdo.
Sidoo kale waa a xayawaan aad u fiican oo la shaqeeya xoolaha taasina waxay leedahay a dabeecad deggan, aad u deggan oo xasaasi ah, wuxuu jecel yahay inuu dadka la joogo.
Fardaha Quarter, waxay yeelan karaan ku dhowaad nooc kasta oo midab jaakad ah. Waxaan ka heli karnaa mid kasta oo ka mid ah jaakadaha aasaasiga ah: madow, bunni, xabadka iyo laabta; noocyada kala duwan ee la qasi jiray sida kareemka, dun, champagne iyo luul. Intaa waxaa sii dheer, xaaladaha qaarkood qaababka roan iyo liart ayaa u muuqda, ama qaababka dhibcaha leh, oo markii horeba laga reebay maantana la galiyay tijaabooyinkaas noocyadooda saafiga ah ay muujinayaan. Lakabka ugu badan ee soo noqnoqda waa suugada ama sorrel (midab casaan ah) noocyadeeda kala duwan «sorrel», taasi waa in la yiraahdo, marooyinka midabkeedu u eg yahay timaha jirka (qaar ka mid ah noocyadan kala duwan waxay muujinayaan manis la dhaqay, laakiin kani maahan kiiska).
Heerarka Rubuca Meel marka loo eego isticmaalkooda
Faraska Galbeedka («Nooca saamiga»), loo isticmaalo tartamada dib-u-dhiska, jarista iyo kala-goynta, isku xidhka weysha, isku-xidhka isteerinka, garaacista isteerinka, noqoshada goos gooska iyo kala-soocida halka ay noocani ka taagan tahay.
Muuji faras («Nooca Halter»), taas oo muruq-buurnida buunbuunintu ku adkaato, oo madaxa ka dhigaysa mid yar oo la safeeyey. Dhererku wuxuu u dhexeeyaa 154 ilaa 163 cm culeyskuna wuxuu gaari karaa 546 kg.
Racehorse ("Tartanka iyo nooca ugaadhsadaha"), Badanaa waxay leeyihiin dherer aad u dheer iyo lugaha dhaadheer, laakiin meesha ay ka soo muuqdaan waa in ay yeeshaan isku xirnaan adag oo u oggolaanaysa dardargelinta waxyaabaha qarxa. Tartannada waxaa si rasmi ah loogu qabtaa goobta orodka oo leh 11 masaafo, oo hadda ay aqoonsan yihiin Ururka Quarter Horse Association (AQHA), oo ka bilaabma 220 yaard ilaa 870 yaard.
Kahor intaanan bilaabin ka hadalka halka uu ka yimid Faraska Rubuca ah, waxaan magacaabi doonnaa oo aan waxyar ka sharixi doonnaa qaar ka mid ah xaqiiqooyinka taariikheed ee saameeyay, marka lagu daro isbarbar dhigyadan, tiro fara badan oo fardaha hadda jira.
Qiyaastii intii u dhaxeysay sanadihii 711 iyo 726, duulaankii Muslimiinta ee Jasiiradda Iberia ayaa dhacay. Waa markaa, markii laba ka mid ah farqiga ugu caansan ee aasaaska abuurka cusub, yimaaddeen Yurub: Faraska Carabta iyo Berber oo ka yimid Waqooyiga Afrika. Labaduba waxay leeyihiin door aasaasi ah fardaha Isbaanishka, Boortaqiiska iyo Faransiiska.
Dhowr qarni ka dib, Sannadkii 1519, Hernán Cortés wuxuu yimid Dunida Cusub isaga oo wata 32 faras, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen kuwa ka yimid Dooxada Guadalquivir ama Marismas iyo fardaha labada Carab iyo Berber ka soo farcamay. Sheekada soo socota waa wax yar oo si fiican loo yaqaan, fardo qaar ayaa baxsaday, noqday fardaha maroon ee tarmayay kuna faafayay qaaradda oo dhan. Noocyo kala duwan oo isleeg ayaa ka soo baxay fardahan duurjoogta ah sida Mustang.
Markay ahayd 1800, bannaanka galbeedka Mareykanka waxaa ku noolaa faras duurjoogta ah, oo ah isha sinnaanta Hindida Mareykanka, in Waxay barteen in la dhaqdo, waxayna noqdeen fardooley aad u wanaagsan, waxayna bilaabeen inay fardoobaan. Waxay ahaayeen aqoonyahanno hidde-yaqaanno wanaagsan waxayna sameeyeen iskutallaabooyin kala duwan si ay u helaan fardo dagaal iyo shaqo fiican. Tusaale fiican waa faraska loo yaqaan 'pinto faras', oo loo yaqaan "Faraska Hindida."
Dhacdooyinka kale ee taariikheed ee saamaynta weyn ku lahaa Quarter Mile waxay ahaayeen gumeysigii Ingiriiska iyo Faransiiska ee dhulalka woqooyiga. Imaatinka Ingiriisiga, uma jeedno inay la socdeen Ingiriisigii Thoroughbred iyaga, tartankaas weli kuma uusan jirin sidiisa oo kale.
Guud ahaan Yurub, maahan oo keliya In England, Ma ahayn wax soo noqnoqda inaad yeelato fardo haddii aadan taajir ahayn, maadaama ay sinnaanta aad qaali u ahayd. Sidaa awgeed, kuwii lahaa xayawaankan waxaa loogu yeeri jiray "Knights", oo waliba u isticmaali jiray dagaalka. Isbarbardhigyadan waxay ahayd inay taageeraan oo keliya culeyska kan fuushan laakiin sidoo kale kan hubkiisa, sidaas darteed waxay ahaayeen fardo waaweyn oo la mid ah fardaha fardaha ah. Dhanka kalena, Barakaca waxay lahaayeen fardo kale oo yaryar sida Connemara ee Ireland ama Galloway ee Scotland. Kuwani, in kasta oo ay ahaayeen yaryar, ay ahaayeen muruqyo, xoog leh, raaxo leh fuulitaanka faraska iyo dabeecad dabacsan.
Qodob kale oo maskaxda lagu hayo ayaa ah in inta badan dadkii degay Ingriiska ay ahaayeen reer magaal iyagoo raadinaya mustaqbal wanaagsan iyo in haddii ay faras leeyihiin ay ka mid tahay kuwa dhaqaalaha.
Intaas waxaa sii dheer, waxaas oo dhan, waa inaan ku darno xaddidaadda ah in fardaha Ingiriisiga, kuwa wanaagsan, aysan ka bixi karin waddanka si ay u koraan Dunida Cusub. Xaddidaadani waxay ahayd in la hubiyo nadiif ahaanta iyo in ay tahay wax wali ka jira waddamada qaarkood, sida fardaha Iceland.
A fardahaas Ingiriisku keenay, Waxay ku dhacday iyaga oo la mid ah tii reer Spain, way baxsadeen ama waa lasii daayay waxayna ku biireen xoolihii horay loo aasaasay ee fardo duurjoogta ah.
Xaqiiq kale oo ay tahay in loo aaneeyo Ingiriis waa taas Waxay u wareejiyeen jacaylkoodii tartanka fardaha Mareykanka, halkaas oo orodka gaaban uu horay caan u ahaa.
Qalab la'aan la'aanta tartamada gaagaaban ee maylka (402 mitir qiyaastii) noqo mid caan ah, maaddaama ay taasi ahayd cabbirka caadiga ah ee waddooyinka magaalooyinka badankood, iyo in la sameeyo tartan faras waxaa keliya loo baahday in la isku raaco in uu ka billowday jidka bilowgiisa uuna dhammaaday dhammaadkiisa.
Qiyaastii 1730, gumeystayaal lacag haysta ayaa soo dejiyay fardaha Ingiriisiga ah ee Thoroughbred si ay ula tartamaan oo ula dhaqanto maareyada Mareykanka Fardaha ugu caansan wuxuu ahaa Janus, oo uu awoowe u yahay Godolphin Arabian, wuxuu dhashay 1746 waxaana u geeyay Virginia John Randolph sanadkii 1756.
Ma dhihi karo taas Janus ahaa faraska aasaasay tartanka Quarter-Mile, laakiin isaga farac kakooban oo xoog badan, ayaa si weyn u saameyn doona isirkan cusub.
Faras kale oo muhiimad weyn lahaa Sir jir, oo dhashay sanadkii 1805, oo ay faraciisu ahaayeen kuwa ugu saameynta badan horumarka tartanka Quarter-Mile. Cooper Gunta, Boodhka Birta iyo Shilo ayaa noqon lahaa carruurta sidaas ah waxay leeyihiin muhiimad dheeri ah maadaama ay yihiin xayawaannada waxay aasaaseen tartanka Quarter Mile. Sannadkii 1844-kii, Birta Boodhku waxay timid Texas sannado yar ka dibna waxay timid Shilo, oo ka timi midowga gabadha koowaad iyo wiilka labaad, isteerinka Billy ee ay ka timaaddo Faraska Texan Quarter ayaa ka dhalan doona.
Waxay noqon laheyd si sax ah ee Texas halkaa Noocan fardaha ah wuxuu joojiyay inuu noqdo tartan gaaban, oo wuxuu u sii gudbi lahaa inuu noqdo nooca ugu muhiimsan ee fardaha lo'da. Halkaas, waa halka Quarter Mile ay wax weyn ku soo kordhisay adduunka warshadaha lo'da, iyadoo khibrad weyn u leh abaabulka lo'da.
Dagaalkii sokeeye ka dib, xeryihii lo'du waxay bilaabeen inay soo baxaan. Markii hore, lo'da waxaa lagu soo aruuriyay berrin bannaan, waa la wada raray oo waxaa lagu raray meydadka. Si ay xoolahan ugu dhaqaajiyaan waqooyiga dalka, waxay isticmaaleen khadadka tareenka ee koonfurta Texas. Imaatinka Quarter Mile qayb ahaan wuxuu ahaa kacaan yar. Cowboys-ku waxay ogaadeen dareenka ah in sinadaani ay leedahay inay ka shaqeyso meelaha daaqsinta, dhaca iyo dhaqashada lo'da, marka lagu daro inay ku tartamayaan tartamada sida ay ilaa hadda sameynaysay.
Isku-darka hidda-wadaha ee sinnaanta, ilaa hadda la arkay, waa inaad mid kale ku dartaa si aad u dhamayso noocani cusub: mustangga. Fardahan sharafta leh ee duurjoogta ah waxaa lala tallaabay wiilashii Janus iyo Sir Archy, iyagoo dhammeeyay Tartankii Quartarka.
in 1940, koox dad ah oo xiriir la leh fardaha koonfur-galbeed Mareykanka, oo ay ku jiraan kuwa dhaqda iyo kuwa xoolaha dhaqda, aasaasay Ururka Faraska Quarter American (AQHA) si loo ilaaliyo abtirsiga Faraskiisa Koowlaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Faras Quarter